पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ ? उसोभए यो पानी पिउनुहोस् – Sandesh Press
August 25, 2021 447
काठमाडौँ । अहिले गर्मिको सिजन चलिरहेको छ । र यो कुरा पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्ने गर्दछौ । जसमा अहिलेको मौसममा धेरै मानिसहरु बिरामी भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ । र यसको पछाडिको कारण हालसमयमा बढि गर्मिले हुनु हो ।
अब यस्तो समयमा एक चिज छ जसलाई अत्यन्तै महत्वप्रर्ण र कारागर मानिन्छ त्यो हो किशमिश पानी । केवल रातभर किसमिसलाई भिजाउनुहोस् र त्यसपछि यसलाई खानुहोस्,त्यो भिजेको किशमीशको पानीलाई पनि पिउनुहोस् किनभने यो अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ।
त्यसोभए हामी आज सुरु गरौं र जब तपाईं किशमीशको पानी पिउनुहुन्छ तब तपाईलाई के फाइदा हुन्छ त ? तर यो याद राख्नुहोस् कि यो हप्ताको दुई पटक मात्र गर्नुपर्छ, किनकि जुन चिलाई हामी धेरै प्रयोग गर्दछौँ त्यो चिज विष पनि बन्न सक्दछ ।
यो पानी पिउँदा मृगौलाको कार्यलाई सुधार गर्दछ र यसलाई लामो समयको लागि स्वस्थ राख्छ। किसमिस पानी पिउँदा आँखाको लागि धेरै राम्रो र लाभदायक मानिन्छ, यसो गर्दा आँखा राम्रा र उज्यालो रहन्छन्।
यस्ता व्यक्तिहरू जसको हड्डीहरू कमजोर हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरुले पनि यसको धेरै लाभ उठाउँछन् र साथै तपाईंको दाँत पनि धेरै बलियो हुन्छन्।
जो व्यक्तिको पाचन धेरै कमजोर छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई यसले धेरै नै मद्दत गर्दछ र पेटमा ग्यास र एसिडिटी जस्ता समस्याहरू पनि यसलाई ठूलो हदसम्म छुटकारा दिन्छ।
यदि तपाईमा रगतको कमी छ भने तपाईलाई एनिमिया हुने खतरा बढ्न सक्छ त्यसैले शरीरमा रगतको कमी नहोस् भन्नको लागी यो पानीलाई पिउने गर्नुहोस् ।
Prevआज घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
Nextभियाग्राको साइड इफेक्ट : ‘बेहोश हुने, पेट फुल्ने र स्मरणशक्ति घट्ने समस्या’